Efa tsy hita intsony i Anja Schaap, PsyOp? Jereo ny antony (video) eto: Martin Vrijland
Efa trandrahina ve ny raharaha Anja Schaap ho PsyOp (fiasa ara-tsaina)? in ny lahatsoratra teo aloha Efa nanambara aho fa ny raharaha Anja Schaap dia mety hitodika amin'ny fampidirana ny rindrambaiko antsoina hoe 'Sherlock'. Eny, inona no hitantsika raha jerentsika ny pejy Facebook an'i Anja Schaap? Avy eo dia hitantsika fa manana adiresy manaraka izy eo ambanin'ny adiresy: 221B Baker Street. Raha raisina an-tsaina fa tsy sangisangy mangidy izany, dia hipoitra avy hatrany ny rohy miaraka amin'ny app Sherlock.
Iza marina no niaina tao amin'ny Street Baker 221B tany Londres? Marina, Sherlock Holmes. Noho izany dia azo inoana fa ny profil Anja Schaap, tafiditra ao anatin'izany ny tambajotra sosialy iray manontolo (na ny ampahany azy), dia nivadika tamin'ny alalan'ny lalom-panafody. Misy tambajotra iray ao amin'ny Inoffizieller Mitarbeiter koa dia azo ampiasaina hanomezana fahamendrehana ny tambajotra Facebook. Na ahoana na ahoana, mazava ho azy fa tsotra ny olona maneho ny rohy amin'ny fampiharana Sherlock. Jereo ary vakio avy eo ity lahatsoratra ity Tsara ny mahatakatra ny fomba amam-panafody sy ampiasaina.
Ny taonan'ny 33 taona, dia porofo koa fa mifampiraharaha amin'ny PsyOp Freemason izahay. Ny isa 33 dia miavaka indrindra amin'ny fiarahamonina miafina.
Ny isan'ny valim-panontaniana ao amin'ny fahitalavitra Anja ao amin'ny Facebook dia toa somary mitombo ary ankoatra izay, ireo valinteny ireo dia toa avy amin'ny profetik deepfake indrindra. Ny profil iray manontolo an'i Anja mihitsy no toa lasa lalina lalina. Ankoatra izany, ny andalan-tsoratr'izy ireo dia miantso an'i Alice any Wonderland, izay manondro ny lalan'ny lavaka bitro (lalan-dalamby). Miaiky ihany koa izy fa miseho ho mavitrika ho an'ny 2 nandritra ny taona maro izy, ary na dia miavaka kokoa aza dia liana amin'ny serasera TV momba an'i Sherlock Holmes (eritrereto ny fampiharana an'i Sherlock).
Hitantsika ihany koa ny filazana an'i John de Mol, izay efa nanambarako lahatsoratra marobe fa mety ho ilay lehilahy lehibe ao ambadiky ny famokarana lalina ("Iza moa i Mol?"). Izany rehetra izany dia eo ambany fitarihan'ny "Raha maneho azy mivantana isika ary miala amin'izany, dia fantatsika tsara fa afaka manambara ny zava-drehetra amin'ny vahoaka isika"?
Tags: 221B, Anja, App, Baker Street, deepfake, deepfakes, Facebook, Featured, Holmes, piraofilina, psyop, ondry, Sherlock, very, tsy hita
3 June 2019 ao amin'ny 22: 18
Ity ny lahatsoratra etsy ambany ity lahatsoratra ity (vakio amin'ny ankapobeny amin'ny fipihana ny rohy):
Tsy fantatro raha tianao ilay sarimihetsika Ny Truman Show dia nahita izany ary tena manoro hevitra ahy hijery horonan-tsary, andian-tsarimihetsika sy fahitalavitra araka izay tratra, satria izany dia hametraka anao amin'ny hypnosis. Na izany aza, io sarimihetsika io dia mikasika ny fifohazana avy amin'ny hypnosis, saingy ny hany tokana ho an'ny mpikatroka Truman (nalain'i Jim Carrey). Ny fampisehoana an'i Truman amin'ny zava-misy iainantsika dia somary lavorary kokoa ary olona maro no miara-miasa amin'izany ary betsaka ihany koa ireo olona izay mihazona izany zava-misy marina izany. Izany no zava-misy izay tarihin'ny ampahany kely amin'ny mponina ary maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny Truman Show no tsy mahalala izany. Izany dia satria ny famantaranandro dia misy radars sy ampahany maromaro. Satria ny olona ihany no mamorona radara amin'ny ankapobeny, izy ireo mihitsy aza dia tsy mahita fa izy ireo dia ampahany amin'ny fametrahana ny lisitry ny orinasa sy ny famitahana. Ny haavon-kevitra izay mahatsikaritra izany dia ny fototry ny fahasarotana ary tsy afaka ny hahazo izany isika noho ny fisian'ny fieritreretana; raha tsy izany dia tsy hitarika izany dingana izany izy ireo.
Angamba ianao mpamaky vaovao eto ary hahita izany tsy misy dikany. Tsy heverinao fa ianao dia karazana Truman Show mihitsy. Ho hitanao fa mety ho 'disadisa' ary te hiala amin'ny olona ratsy ianao. Ho hitanao koa ny fampisehoana tahaka ny an'i Marco Borsato sy ny mpanakanto namany angamba mety ho fialam-boly mahafinaritra sy fialam-boly mahafinaritra (miankina amin'ny fanandramanao). Azonao atao koa ny mirehareha amin'ireo famokarana lehibe izay mbola eo am-pelatanan'ny Netherlands. Mety ho fantatrareo fa nomen'ny Romanina mofo sy lalao koa ny olona, ​​saingy tsara ho anao izany; mahafinaritra anao izany. "Miaraka tsara daholo izahay rehetra!" Mety hieritreritra ianao hoe mety hitranga ny fonja iray manodidina antsika. Raha ny marina dia azo ampiharina amin'ny ankamaroan'ny olona izany. Izany no vokatra izay hitanao amin'ny lahatsary etsy ambany. Mitadiava izany. Lahatsary mahatsikaiky ihany koa izy, satria mihevitra ny olona ao ambanin'ny hypnose fa mihinana mango mamy izy ireo. Noho izany dia tsy manandrana ara-bakiteny ny asidra ilay citrone izay manaikitra azy ireo.
Moa ve tsy mino ianao fa voatsabo ao amin'ny hypnosis? Tamin'ny voalohany, tsy takatr'i Truman fa tsy nisy zava-misy marina izy, mandra-pahitany zavatra mahavariana. Izao dia afaka miteny ihany koa ianao: "Tsy te hahita ireo zavatra miavaka ireo aho ary mihevitra fa tsara ny fomba iainako ankehitriny." Ankoatra izany, ireo mpiambina ny Trumans Show (ireo mpanorina ny asa radar iray manontolo izay mitazona izany) dia nanamafy fa ny olona izay mihevitra ny hitsikera dia manjary lasa 'saina mpandinika', 'right', 'nationalistic' 'anti- fanatontoloana ", 'fepetra manohitra ny toetr'andro', 'ireo olona izay mino fa marefo ny tany', sns., ka tsy te ho anisan'io vondrona io ianao. Vakio avy eo ity lahatsoratra ity ho fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny fomba nanaovany izany.
Koa raha tokony hijoro eo amin'io sehatry ny hipnotista Rasti Rostelli io aho dia hitsangana sy hihiaka hoe mihinana lemon-koditra ianao ary misy fiantraikany eo amin'ny tohotra nify anao; raha te hanondro anao ny hoditra mavokely sy ny voany ho porofo fa sôronôna izany, dia hampahatsiahy ahy ny hiala sy hitandrina ny vavako. Raha ny marina, fantatrao tsara fa mihinana mango mamy mafana ianao. Noho izany dia tsy te hihaino ahy ianao ary anisan'ireo vondrona misy ny hypnose miaraka aminao, izay tsy te hihaino ahy koa. Tsy misy olona te-handre fa mihinam-boaloboka izy ireo. Miara-mihomehy amiko ianao ary maneso ahy.
Na izany aza, mazava tsara ny porofo, saingy tsy te hahita sy tsy hahita izany ianao satria ny atidohanao dia mamela ny vaovao. Na dia izany aza dia maivamaivana ilay voankazo:
Ny governemanta dia mampiasa vaovao sandoka, teknolojian'ny famokarana TV, amin'ny alalan'ny lalina lalina sy ny rindrambaiko asa ara-tsaina (PsyOps) mba ahafahanao manaiky lalàna izay mety hialan'ny olom-pirenena rehetra eny an-dàlana tsy misy fitsabahan'ny mpitsabo na mpitsara (jereo ity lahatsoratra ity en ity fanazavana ity eo amboniny). Miala amin'ireo mpanohitra!
Ny tranonkala 5G dia natsangana izay manome ny governemanta hampiditra ny olombelona amin'ny rafitra fanaraha-maso nomerika, izay ahafahana manova ny ADN sy ny atidohan'olombelona afaka mihetsika an-tserasera (famakiana sy fanoratana). Izany dia manome azy ireo fifehezana tanteraka amin'ny mponina. Ny lalàna momba izany dia voaomana amin'ny alàlan'ny asa ara-tsaina ara-tsaina ara-tsaina izay tsy maintsy mamela ny lalan'ny fanekena DNA data, fanesorana ny vatan'olombelona (lalàn'ny fanabeazana ny taova). Ny fifandraisana amin'ny atidoha dia amidy amin'ny vahoaka amin'ny alàlan'ny amin'ny lafiny iray ny loza mitatao ho an'ny fahiratan-tsaina (AI) dia hahatratra antsika ary handrahona ny loza, mba hahafahantsika mifandray tsara aminy (Elon Musk) sy Amin'ny lafiny iray amin'ny fanomezana ny taranaka vaovao ny fahafahana hianatra haingana kokoa, ary, ohatra, amin'ny lalao sy ny indostrian'ny pôrnôgrafia.
Ny governemanta dia miasa amin'ny tetikasa manerantany izay mampiasa fanoherana na dualisma. Tsy maintsy mihevitra ny US hanohitra an'i Rosia / Shina, fa koa amin'ny dualisma amin'ny politika. Izany no fisehoan'ny andininy havia havia na ny lamina efa napetraka taloha sy "hetsika ara-politika vaovao". in ity lahatsoratra ity Manazava ny fomba fiasan'ny politika nasionaly amin'ny alalan'ny fanoherana mifanohitra.
Ireo governemanta manerantany fampielezan-kevitra manerantany (LGBTI) manerantany dia manenjika ny mponina manerantany amin'ny fifindra-monina. Ny mponina izay nosoloana ny fenitra biôlôjika momba ny heterosexual dia nosoloina fenitra tsy misy herisetra (manomboka amin'ny karazam-panafody rehetra antsoina hoe LGBTI); Tsy ho afaka hamerina amin'ny fomba voajanahary intsony ny mponina ary halefa amin'ny fanjakana ihany koa ny fanaraha-maso. Ny fari-pahaizana tsy miandany amin'ny lahy sy ny vavy dia avy amin'ny toetra ara-pivavahana (Luciferian, avana). Ny lalànan'i Losifera vaovao vaovao eo amin'ny fanatanterahana ny fivavahana 1 manerantany, ny vondrom-piarahamonina 1 (ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny transhuman) ary ny governemantan'ny governemantan'i 1.
Ny lisitra etsy ambony dia famintinana fohy momba ny asidra asidra izay laninareo. Mihamitombo hatrany izany, saingy fahatsapana kely izany.
Mangataka anao aho hivoaka ny hipnotinao ary hampihorohoro ireo olona mijoro miaraka aminao eo amin'ny sehatra Rasti Rostelli. Ny Marco Borsato eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mitazona anao amin'ny hypnosis amin'ny alalan'ny zavatra mahavariana sy fampisehoana mahafinaritra. Raha miafina na tsy mahatsikaritra izany izy ireo dia mandray anjara amin'ny fandaharam-potoana goavana.
4 June 2019 ao amin'ny 12: 48
Mahita karazana fitarainana ve aho amin'ny fanampiana anao ao amin'ny Facebook?
Ny fanjavonan'i Siebe Viegers dia nanaporofo mazava ihany koa fa na ny olona monina any an-tanàn-dehibe dia tsy nahita na oviana na oviana ny roa-metro-ambony Siebe, izay tsy azo atao, ka ny fatiantoka dia mitsoka 100% amin'ny rivotra mandritra ny ora maro.
Mety ho karazana fatiantoka iray hafa izany, tena azo antoka tokoa
Ireo izay mandray anjara amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ireo olona miasa any amin'ny manodidina ireo karazan'olona izay miditra ao aminy dia azo ekena ihany koa, azo antsoina hoe marary, olona izay mandà ny fepetra ary afaka mandainga amin'ny vahoaka mandritra ny fotoana voafetra vola na tombontsoa hafa, miahiahy aho fa ny fitarainanao ho fanampiana dia manamarina, Mr. Vrijland
Ireo olona marary mandray anjara amin'ny hetsika toy izany dia tsy manara-penitra ary tsy mahatakatra ny fomba ahafahan'ireo olona ireo mijery ny tontolo iainany sy ny fianakaviany. (ratsy noho ny fitondran-tena)
4 June 2019 ao amin'ny 12: 59
"Eny, saingy ny Siebe Viegers dia hita fa tsy psyop izany", hoy ny vahoaka
Valiny: Tsia, izany no lazain'ny media. Izany ve angamba no fomba tsotra indrindra hamenoana ny psyop iray izay lavo amin'ny harona?
Eny angamba, satria raha nihaino ny findaiko ry zareo (izay eritreretiko hoe azo raisina an-tsaina) dia fantany fa nanana sary marobe aho (toy ny fampandrenesana ny resadresaka tao amin'ny toeram-pivarotana izay nahitana an'i Siebe farany).
4 June 2019 ao amin'ny 13: 06
Oh eny ... efa hita fa maty, saingy sarotra loatra ny mamaritra ny antony. Sa tsy misy izy? Ary moa ve tsy tokony hianjera ao an-tsainy ilay tantara?
3 June 2019 ao amin'ny 22: 34
Fleur no hany nanao fanehoan-kevitra 🙁? : vakio
4 June 2019 ao amin'ny 17: 28
Ahoana ny ahatongavanao any amin'ny pejy facebook an'io an'io ondry io?
Tsy mahita azy aho, efa nosoloiko ny rohy.
Raha marina izany rehetra izany dia tsinontsinoatra eny.
4 June 2019 ao amin'ny 17: 43
4 June 2019 ao amin'ny 18: 29
Mitadiava psyop mihomehy ???
4 June 2019 ao amin'ny 21: 01
Midika izany fa aleo manokana ho azy fa toa manova rohy amin'ny Sherlock Holmes ao amin'ny profil facebook izy ireo, toy ny hoe manao izany izy ireo.
Mazava ho azy fa tsy mihomehy fotsiny, fa mitomany.
Saingy nihevitra aho fa mazava izany.
5 June 2019 ao amin'ny 08: 59
Okay, tamin'ny voalohany dia nahatsapa aho fa nihena ny psyop.
Ny psyops tamin'ireny olana ireny dia ny hetsika Gladio nohavaozina. Mendri-piderana kokoa izy ireo, saro-piaro, ambany kokoa.
Eny, ireo lehilahy avy ao amin'ny soratra dia mahafantatra ny fomba hanaovana izany. Miasa mandrakariva amin'ny fanaraha-maso ny zava-drehetra araka ny faniriany izy ireo.
ludcor nanoratra hoe:
4 June 2019 ao amin'ny 22: 06
Tsy misy Bakerstreet any amin'ny distrikan'i Katwijk (trano sy toerana nahaterahan'i Anja). Mazava ho azy fa psyop iray.
5 June 2019 ao amin'ny 04: 55
Tsy mbola nanonona ny anarana hoe Sheep akory aza. Ny ankamaroan'ny ondry dia mamela azy ireo hizotra sy hatahotra an'ireo mpiandry ondry (fampahalalam-baovao) mba hahitan'ny mpitarika ao amin'ny firenentsika ny tsara indrindra ho antsika.
11 June 2019 ao amin'ny 09: 36
Voamarikao fa tena marina ianao, ny TV West dia mety nampiasa Face Morphing, deepfake miaraka amin'ny greenscreen,
Ny porofo manamarina ny fiainan'i Anja Schaap dia efa nataon'ny lehilahy iray izay niaina teo ambanin'ny trano an'i Anja tao Wega 15. ao Katwijk, aseho ao amin'ny sarimihetsika fahitalavitra TV West, jereo ny sarimihetsika TV Andre ao amin'ny rohy
Kanefa, raha vao mihaingo amin'ny tarehin'ity lehilahy ity isika, dia efa mahita fiovana hafahafa.
Noho ny lalàna AVG, tsy azo atao ny mametraka sary eto amin'ity tranonkala ity izay ahafahana manondro ny fiovan'ny toetr'andro. Na dia nanao ny tsara indrindra sy ny fahadisoana nataony aza izy ireo, saingy mazava ho azy fa tsy maintsy mionona amin'ny tarehy ianao, tsy misy olona mandray an'io fotoana io fa eritrereto raha toa ianao
Ireto ambany ireto ny teninao: minitra 01 min -25 sec. 00 mankany 01 min-51 sec. Ny 18 dia betsaka kokoa fa ireo no tena manan-danja indrindra.
1- Ny sofin'ny lehilahy dia miondrika amin'ny tarehy
2- Ny endriky ny sofina dia azo lazaina fa azo atao ihany koa atao hoe tsy voajanahary
3-Ny lokon'ny volom-borona, ny loha avy amin'ny mainty matevina manopy volomparasy ary ny mofomamy Red? (azo atao, nefa mbola?)
4-minitra 01-28.2 Ilay fipoahana goavambe eo amin'ny tsipika? Izany dia satria manodinkodina ny lohany ho eo amin'ny ilany havia, eny fa azo atao izany, saingy ny angona (sary maloka) dia eo ihany koa rehefa mihazona ny loha.
5- Manodidina ny jirony sy ny tendany ny fipoahana goavana fa ny jiro mainty mainty no mampiseho azy
Sarin'ny razor-sharp, mety ho hitanao mihitsy aza ilay lamba.
6- Mandehana avy amin'ny 1-37.07 faharoa mankany 1-37.19, ny fanokafana ny vava dia tahaka ny robot
Mivadika ny valanorano fa ny sisa amin'ny tarehy dia mijanona ho mafy, izay tena tsy voajanahary.
7- Amin'ny minitra 1-45.17 dia manokatra tanteraka ny masony, hany ka maro ny hazavana hipoitra eo amin'ny hodi-koditra, fa ny mijery tsara sy maizina indray dia diso
8-01-46.19t / m 01-47.12 Ireto ny sangisangy, ny kitapo izay maneho ny hatezerana eo amin'ny ankavanana, fa tsy amin'ny masony havia mihitsy, ny jiro mitovitovy loatra, ny harona
dia manjavozavo loatra, ny mason-tsivana izay tsy hita ho iray segondra. Misy kely sy miverina eo amin'ny takolaka saingy tsy eo ny hatavezina, ny fehy tsy hita intsony etc .. sns ...
9- Ny toerana mibontsina mipetaka eo amin'ny kibon'ny vavany, avelao izy ireo handeha ankehitriny ary avy eo
Fihetseham-po amin'ny fanehoana ny fahasamihafana sy ny halalin'ny vavany, dia toa tsy mahazatra loatra izany.
10-Minitra 01-38.07 hatramin'ny 01-42.22 Mijery ny kapaotin'ilay akanjo mateza mifandraika amin'ny fihetsika mihetsiketsika tsy tapaka, mihetsiketsika ny kapaotiny (kapila) mivezivezy ary miverimberina foana ny ravina hatraiza hatraiza Ny fakantsary dia mbola mihetsi-po mihetsiketsika, fa maotera camera ma.
11 - Ho an'ny mpijery tsara: tsy mahita ny rindrina havia sy ny lozam-pifaneraserana hafa mifandraika amin'ny loha-hevitra ianao, fa tokony ho foana izany fakantsary izany.
ary jereo ny safidy hafa
12 June 2019 ao amin'ny 13: 06
Ny lalàna AVG dia mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny olom-pirenena, izay mety ho mazava amin'izao fotoana izao.
Mazava ho azy fa adaladala ihany koa ny milaza fa ny Media (= ny herim-pamokarana) dia afaka manidina any amin'ny vahoaka masse, fa ny vahoaka dia tsy afaka mampiasa ny fomba fiasa ho an'ny mpiara-belona aminy, afaka manaporofo izany ny vahoaka. Fanimbana tanteraka ny teny maimaimpoana ary avy eo manohy miresaka sy mino fa miaina anaty firenena demaokratika malalaka isika. Amin'ny fomba fampiasany azy ireo dia manome porofo mivantana fa miaina anaty herisetra isika, nefa tsy afaka manaporofo izany fa noho izany dia mety hosazina indray izany
13 June 2019 ao amin'ny 15: 55
Manaiky aho! Jereo ny fandroahana ny sarimihetsika "mpiasa ara-tsosialy" tsy ho ela amin'ny resaka zo momba ny tsiambaratelo. Ny fampiasana ny fanjakana dia mampihetsi-po tokoa, ny fisainan'ny Machiavelliana. Manao ny 180 ° fotsiny ianao
"Manampy amin'ny fanaovana hosoka amin'ny alàlan'ny horonantsary sy fizarana amin'ny media sosialy: famaizana mafy!
miaraka amin'ny horonantsary ianao mandika ny tsiambaratelon'ireo niharam-boina. "Tokony hosazina mafy ny famoahana ireny fitaovana ireny amin'ny media sosialy. Satria ny momba ny lalàna momba ny tsiambaratelo, tsy lazaina intsony hoe inona ny lahatsary toy izany ho an'ny fianakaviana sy ny namana. "
Ny làlana toy izany dia mety handeha ho azy manokana ary hanampy olona any aoriana raha tsy misy porofo AV. Ny mpanompo cq. Ny psychopath dia mila arovana amin'ny fotoana rehetra, mihena ny hafanam-po amin'ny asa toy izany ary ny avo dia avo avo lenta. Alohan'ny hiatrehana ny UAV / robots AI, ity fotoana ity dia tokony hampiasaina mba hanakanana ara-dalàna ny zava-drehetra, mazava ho azy amin'ny faran'ny firenena 😀
« Ny Thijs H. PsyOp dia tsy maintsy manafoana ny tsiambaratelo manokan-tena ary efa vitaina amin'izao fotoana izao
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ampiasaina ankehitriny mba hangataka fanambarana amin'ny mpanjifa amin'ny mpisolovava? »
Total visits: 12.263.862
Mind Supply op Ny asterisk Disney Channel teo aloha dia nilaza fa nisy nanararaotra ny pedofy any Hollywood
Caesar Lion Cachet op Rahoviana i Etazonia no mandoa hetra amin'ny toetr'andro amin'ireto baomba ireto dia alain'izy ireo?